Banyere ịdị n'otu dị elu
Onye na -eme mkpọchi metal
Onye na-eme ihe ntanetị kwụ ọtọ
Igwe igwe na -eme briquetting
Metal akpacha ajị igwe
agụba metal agụ iyi
akpa ịkwa osisi
nnukwu igwe ịkwa osisi
ihe nkedo nke igwe ihe nchara
Igwe mgbaji Bale
Ahịa na Ọrụ
Y81 usoro metal kọmpat okwu mmeghe
Kedu ụdị isi ndị na -eme achịcha igwe na -ere ahịa n'ahịa? E nwere ụdị isi atọ a na -ahụkarị, ya bụ, ngwugwu akwụkwọ ntuziaka kwụ ọtọ, ngwugwu akwụkwọ ntuziaka kwụ ọtọ, kwụ kwụ akpaka. Kedu otu esi azụta kọmpat metal n'efu na ọdụ nkwakọ ngwaahịa? Olu nke ya, ya bụ, tụlee ...
Y81 igwe anaghị agba nchara hydraulic igwe
N'ihi ntakịrị ihe ịnweta ịnweta na-adịghị emegharị emegharị, site na mmepe nke mmadụ na-aga n'ihu, a na-ebelata akụ ndị a mgbe niile, ụkọ akụ ga-abụrịrị ọnọdụ mmadụ kwesịrị iche ihu ozugbo. Ihe ịtụnanya nke ochie na nke ọhụrụ edochi ...
Nwụnye na nbipu nke igwe Y81 hydraulic metal baler
Igwe anaghị enwe mkpọtụ dị mkpa mgbe ọ na -arụ ọrụ, yabụ enweghị ihe pụrụ iche achọrọ maka ntọala ahụ. Ndị ọrụ nwere ike ịtọ igwe n'ime ụlọ ma wụsa ụlọ nkịtị nkịtị dị ka ọnọdụ ụfọdụ siri dị. Na usoro nwụnye, ekwesịrị idobe onye ọbịa ...
Mpempe igwe igwe na -arụ ọrụ igwe na -emebi emebi na nchọpụta nsogbu
site na nchịkwa na 21-07-22
Ndakpọ nke onye na -eme ihe nchara hydraulic mebiri emebi yana usoro mkpebi atụmatụ mmezi. Nyochaa ihe nwere ike ịkpata mmejọ ahụ dabere na akara ngosi mmejọ wee kpochapụ ihe ndị ahụ otu otu ruo mgbe achọtara ihe ikpeazụ kpatara mmejọ ahụ. Enwere ike ikwenye ya ...
Ntinye teknụzụ nke usoro Q91Y dị arọ gantry shiee igwe
site na nchịkwa na 21-07-08
Q91Y usoro nnukwu ọrụ gantry sheee machine bụ ụdị akụrụngwa dabara adaba maka ịkpa nkwọcha. Usoro usoro Q91Y anyị dị oke mkpa maka igwe ịkwa akwa dị mma maka nchara dị nchara, mmanya nchara, efere nchara, efere nickel, steel, steel steel, pipe steel, co ...
Mmezi nke Y81-2500 Metal Packing Hydraulic Press Machine
JIANGYIN Jikọtara igwe nrụpụta ihe dị elu Y81-2500 igwe na-eji akwa hydraulic na-achịkwa ịkpụzi na ịkwakọba ihe mkpofu site na ngwaọrụ hydraulic, nke nwere mgbasa ozi dị ukwuu na iji uru na ụlọ ọrụ ígwè na nchara na ụlọ ọrụ na-emegharị ihe mkpofu, a ...
Ojiji na uru nke onye na -eme mkpọchi ọla
Enwere ụdị igwe nchara dị iche iche, nwere nha dị iche iche ma dị mma ma ọ bụ ihe ọjọọ, nke bụ nnukwu nsogbu na nchekwa, njem na itinye ya n'ime ọkụ igwe igwe maka mmega ahụ. Ọzọkwa, njigide ọla nchara ruo ogologo oge ga-ebute obere mmetọ ikuku, yana ogologo oge ...
Mkpa nke ijigide ngwugwu igwe hydraulic
site na nchịkwa na 21-03-09
Idebe sistemụ hydraulic nke onye na -eme ihe nchara hydraulic bụ otu n'ime ihe dị mkpa iji belata ntinye akụrụngwa na ọnụ ahịa ọrụ nke ebe nhazi ebe a na -ejigharị ụdị ihe ọ bụla. Ime ezigbo ọrụ nke igwe mgbawa pịa sistemụ hydraulic bụkwa otu n'ime ihe dị mkpa ...
Kedu ụdị ọrụ igwe akpacha ajị igwe nwere?
Igwe nchara akpacha ajị nwere ọtụtụ ngwa, arụmọrụ dị elu, arụmọrụ dị mfe, na ndozi dị mma. Enwere ike itinye onye ọbịa n'ụlọ ma ọ bụ n'èzí. A na -eji igwe sayensị eme igwe ịkpa akpacha ajị. Ihe mbụ bụ na mmemme na -achịkwa moto ...
Chịkọta usoro ọrụ na mkpachapụ anya nke igwe achicha igwe mgbawa
Nchagharị igwe bụ ụdị ihe mkpofu na -eme mgbe nhazi ngwaahịa ma ọ bụ akụkụ ọla. Ọ bụ akụrụngwa maka imepụta nchara dị elu. Agbanyeghị, ọ ga-adị mkpa ka igwe eji eme achịcha achicha na-akpụcha ya. Maka na ọtụtụ mmadụ amaghị usoro ọrụ ndị na -arụ ọrụ ...
gbasara anyị ahịa netwọkụ kpọtụrụ anyị ọrụ
Ọla Baler, Akwukwo Compactor na Baler, Igwe Baler Aluminom, Pop-Top Pụrụ Ime Ngwa, Scrap Metal Compactor, Y81 Hydraulic Baler,